Marxuum Madoobe Aaden Dalab oo lagu aasay qabuuraha Bari ee magaalada Gaalkacyo. – Radio Daljir
Marxuum Madoobe Aaden Dalab oo lagu aasay qabuuraha Bari ee magaalada Gaalkacyo.
Diseembar 29, 2012 2:30 b 0
Gaalkacyo, Dec, 29-? Waxaa maanta qabuuraha bari ee Gaalkacyo lagu aasay AUN marxuum Madoobe Aaden Dalab oo ka mid ahaan jiray saraakiishii ciidanka milatariga Soomaaliya balse hada ka mid ahaa odoyaasha magaalada sida weyn looga yaqaan gobolka, kaasoo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen xaafadda Israac.
Aaska waxaa ka qayb galay boqolaal qof oo isaga kala yimid xaafadaha magaalada, marxuumka ayaa aaskiisa dadweynaha ka qayb galay waxay ku tilmaameen shakhsi lagu yiqiinay furfurnaan iyo bulshinimo iyadoo Eebe looga baryay inuu janadiisa ka waraabiyo.
Illaa hada majirto cid loo soo qabtay dilka marxuum Madoobe, hase ahaatee waxaa gobolka caado ka ahayd dhawrkii sanno ee ugu danbeeyay la dil lamana yaqaan taasoo astaan u ah Gaalkacyo.
Masuuliyiinta gobolka iyo laamaha ammaanka ayaan wali soo bandhigin wax raada oo ku saabsan falkaas marka laga reebo tacsiyayn iyo muujinta dhacdada tusaalaha ka bixinaysa xasilooni daradda gobolka gaar ahaan magaalo madaxdiisa Gaalkacyo, waxaana falkani oo qayb ka yahay dilalkii arxan daraddaa ee ka dhici jiray magaalada sanadihii u danbeeyay.
Gudiga nabad galyada gobolka Mudug oo maanta Shir-Jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo.
Ardayda reer Puntland ee dalalka Itoobiya iyo Shiinaha oo baaq ka soo saaray xaaladaha Puntland.